Raikitra ny fisavana – Anjanahary : nahiana ho manana fitaovam-piadiana ny mpitarika ny AFP (NewsMada) | AEMW
Raikitra ny fisavana – Anjanahary : nahiana ho manana fitaovam-piadiana ny mpitarika ny AFP (NewsMada)
Tsy an-kiandriandry. Nosavain’ny mpitandro filaminana maromaro ny tranon’ny mpitarika ny AFP, noho ny fiahiahiana azy ho mitazona fitaovam-piadiana. Niala maina anefa izy ireo satria tsy nahitana izany tao amin’ny tokantrano iray, eny Anjanahary. Nitantara izany ny fianakaviany. « Nisy andiana miaramila tonga nilaza fa hitady an’i Faniry saingy izy anefa efa tsy mipetraka ato ntsony… Nilaza izy ireo fa noho ny fihazonana fitaovam-piadiana tsy nahazoana alalana no anton’ny fisavana. Tsy nahita na inona na inona izy ireo. Tsy nisy fampiasan-kery… », hoy izy ireo. Nambaran’ny fianakaviana fa 15 ireo mpitandro filaminana niditra tao amin’izy ireo ankoatra ireo tany amin’ny arabe, anaty fiara sy mandeha moto ary nahitana manao fanamiana sivily na koa misaron-tava. « Mampatahotra anay avokoa izany rehetra izany sady hoatry ny hoe mpanao ratsy izahay. Mahatsiaro ho afa-baraka satria mitovy amin’ny mpangalatra... », hoy ihany izy ireo.
Nanamafy izany ny lehiben’ny CIRGN, ny Jly Rakotomahanina Florens, tetsy Ankadilalana fa niainga amin’ny loharanom-baovao ny resaka fitaovam-piadiana nefa tsy nahitana izany tao. « Tsy nisy ny fisamborana natao », hoy izy.
Hiverina eny amin’ny kianjan’ny 13 mey anio
Etsy andaniny, nitondra fanazavana ny mpitarika ny AFP, Razafimanantany Faniry ary nilaza fa misy mifofo ny ainy. Tsy hampihemotra azy anefa izany. « Efa nifampidinika tamin’ireo mpitarika aho ka hiverina eny an-kianja rahampitso (anio)… Mampalahelo ny fihetsiky ny fanjakana. Inona no anenjahana ahy ho mitam-basy ? Mamorona fotsiny izy ireo. Tonga hatramin’ny fikendrena ny aina mihitsy ny raharaha, ankoatra ny ramatahora », hoy izy. Manoloana izany, nilaza ny tenany fa tsy maintsy mitandrina satria tanjona ny hahombiazan’ny tolona na eo aza iny tranga niseho, omaly, iny. « Nenjehina milisy ny mpikambana avy aminay… Hijoro hatrany izahay nefa tsy maintsy mailo…Na eo na tsy eo Faniry mitohy ny tolona », hoy izy.
← Voasakana ny hetsiky ny Antso ho Fanavotam-pirenena : miaramila zavontany tetsy Analakely (NewsMada)
Hery… famoretana ! (NewsMada) →